22 Sano Khibrad Markab Maraakiib ah Kazakhstan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 Mersin22 Sano Khibrad Markab Maraakiib ah Kazakhstan
22 Sano Khibrad Markab Maraakiib ah Kazakhstan
08 / 01 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Warqad Hordhac ah, TURKEY
sano ee khibradda dhoofinta ee Kazakhstan
Kazakhstan, oo ka mid ah jamhuuriyadaha Turkey-ga isla markaana ah dalka ugu weyn marka la eego aaggan, ayaa leh taariikh qadiim ah. Waxaa jira iskaashi badan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka dhexeeya labada dal, sidaa darteedna, is-weydaarsiga labada dhinac ayaa sii socda si joogto ah. Xaqiiqda ah in tirada wax soo saarka, oo lagu muujiyo kumanaan alaabooyin ah oo laga soo saaray waddankeena, waxaa loo dhoofiyaa Kazakhstan waxay ka dhigeysaa qaybta gaadiidka mid soo jiidasho leh.
Dalkeenna waxaa ku yaal shirkado badan oo dhoofin ah kuwaas oo hawlahooda saadka ka sameeya dalalka Aasiya, laakiin qaar ka mid ah ururradan ayaa ka shaqeyn kara Kazakhstan. Iyada oo ay sabab u tahay adeegsiga wadooyin kaladuwan, shirkadeena waa mid ka mid ah shirkadaha saadka ee ka shaqeeya dalka oo lagu bixiyo gaadiid waxayna leedahay howlo aad u dhameystiran. Shirkadaha Maraakiibta ee Kazakhstan ayaa had iyo jeer safka hore kaga jira shaqooyin kaladuwan oo soo jiidanaya dareenka. Shirkaddeenna, oo bixisa adeegyo gaadiid qayb ahaan Kazakhstan iyadoo sameysa safarradi toddobaadle ah oo caadi ah oo wata gaadiid buuxa, waxay sidoo kale fulisaa gaadiidka nooc kasta oo xamuul ah oo ku habboon gaadiidleyda noocaas ah ee aagagga ay ka midka yihiin safarka culus, rarka konteynarrada iyo gaadiidka xamuulka.
Alaabada la soo saaray waxaa la gaarsiiyaa dhammaan magaalooyinka Kazakhstan, gaar ahaan caasimada Astana. Qaabka ugu doorbida badan ee gaadiidleydu, waxay gawaaridu dhoofisaa dhammaan noocyada alaabada dhoofinta oo leh miisaan aan ka badnayn 22 tan. Wadada udhaxeysa Iran-Turkmenistan-Uzbekistan, oo si aad ah loo isticmaalo marka laga reebo wadada loo maro Georgia-Azerbaijan ama Georgia-Russia Waxaa loo dhoofiyaa Kazakhstan siyaabo kale oo gaadiid. Shirkaddayada Globalah Global Logistics waxay leedahay aqoonta iyo qalabka ay u adeegsato dhammaan siyaabaha kor ku xusan si wax ku ool ah iyada oo ay ugu wacan tahay duruufaha iyo shuruudaha gaadiid ee alaabada lagu qaado gawaarida taarikada ee gudaha iyo dibedda.
Shirkaddeenna, oo siisa adeegyo loojistiko ah iyada oo la raacayo qawaaniinta gaadiidka xamuulka ee weyn, waxay xaqiijineysaa gaadiidka alaabooyinka, oo si buuxda u damaanad qaadaya hoos imaadka ceymiska cmr, si Kazakhstan hababka ugu aamin badan iyada oo aan wax dhibaato ah. Iyada oo la socota kooxda khibradda leh, ee wax ka qabta dhammaan faahfaahinta khadka jira, dhammaan codsiyada gaadiidka ee u imanaya shirkaddeenna, oo adeegga ka shaqeeya saacadaha maalintii oo dhan, ayaa si dhakhso ah loo qiimeeyaa oo xamuulka ugu habboon ee gaadiidka iyo shuruudaha ayaa la siiyaa macaamiisha iyo taliyayaasha waqtiga ugu gaaban.
Wararka: Mehmet Ali BAL
Cunto wargalin:Shirkadaha Saadka
bee) (Shirkadda Sedra 130 sannadkii marxaladda tareenka (Sawir Sawir)
Hagaha Maraakiibta - Shirkadaha Maraakiibta
Mashruucyada DLH waxay bilaabeen inay sameeyaan TCDD laakiin waaya-aragnimada shaqaaluhu kuma filna!
Tareenka kabadhada BTK ayaa u socdaali doona Kazakhstan
Nidaamka Tareenka fudud ee la dhisi doono Allea, Kazakhstan
Line-tareenka labaad ee tareenka ayaa laga furay Shiinaha ilaa Kazakhstan
Qaybta soo saarka tareenada ee ugu horreeya Kazakhstan ayaa waxaa bixinaya Siemens
Mashruuca Tareenka Weyn ee Kazakhstan oo Dhamaystiray
Tareenka bidix ee dhanka bidix ee Kazakhstan (Video)
Tareenada casriga ah ee imanaya Kazakhstan
Soomaaliya si ay u ballaariso soo dejinta qalabka tareenada tareenada ee Kazakhstan
TEP33A Locomotives La bilaabay in Kazakhstan
Baaskiillada Trolley ee Kazakhstan (Video)
In Kazakhstan, tareenka ayaa lagu afduubay 1 dhintay Dead 3
Logah Saadka Caalamka
Xeerarka gaadiidka xamuulka wadooyinka
Shirkadaha Maraakiibta ee Kazakhstan
Adeegyada xamuulka qayb ahaan ee Kazakhstan
Mersin gawaarida xamuulka qaada
Qeybta kiimikada waxay jabisaa rikoor dhoofinta markasta
Xarunta Cusbooneysiinta Saadka ee Saadka ee DHL